Apho unokufumana khona oonobumba abahle kakhulu becursive | Abadali be-Intanethi
Apho unokufumana khona oonobumba abahle kakhulu becursive
Iris Gamen | | Ezahlukeneyo
Ukuba uyingcali yoyilo okanye ufuna nje ukwandisa ikhathalogu yakho yokuchwetheza, kolu papasho siza kukunika uluhlu lwe amaphepha angcono ukwenza i-typography enomtsalane. Ukongeza kumaphepha akhutshelwayo, siya kukunika ukhetho lweefonti ezintle onokuthi usebenze ngazo.
Xa kufuneka sijongane neprojekthi entsha yoyilo, inkqubo yokukhetha i-typography efanelekileyo yinyathelo eliphambili lokuba ubugcisa bokugqibela bube bugqwesileyo. Ukuchwetheza yenye ye ezona zixhobo zibalulekileyo kuyilo kwaye ke kufuneka zikhethwe ngononophelo, ehlala eqwalasela indlela yeprojekthi ephambi kwethu.
1 Iiwebhusayithi ezigqwesileyo zokwenza oonobumba becursive
1.1 Imigca ye Google
1.3 Umlambo wefonti
1.4 Isithuba sefonti
1.5 Iifonti zam
1.6 Iifonti ezingabonakaliyo
1.7 Iifonti ezingama-1001
1.8 Iifonti zase-Urban
2 Iileta ezintle ezinobumba
2.2 Ukudanisa iSkripthi
2.3 Iskripthi seskripthi
2.7 Isikripthi seFreeebooter
Iiwebhusayithi ezigqwesileyo zokwenza oonobumba becursive
Kulula ukuchitha iiyure undwendwela iiwebhusayithi ezahlukeneyo ukhangela iifonti. Ngamaxesha amaninzi, ezi fonti zinokuba kumgangatho ophantsi kwaye zingaphelelanga.
Los Iiwebhusayithi esiza kuzidwelisa zibonelela ngowona mgangatho uphezulu kunye nekhathalogu yokuchwetheza epheleleyo.
Le webhusayithi idla ngokuba yenye yeziphumo zokuqala kukhangelo lokuchwetheza. Lithala apho unokufumana khona phezu 800 font iintsapho.
Iifonti zikaGoogle lolona khetho lusetyenziswa kakhulu ziingcali zoyilo. Yabo Iifonti ziyakhuphela ukongeza ekubeni ngumthombo ovulekileyo.
Kweli phepha, ungafumana iifonti ezikumgangatho ophezulu wasimahla. Uninzi lweefonti esinokuzifumana kwiFont Squirrel ziifonti ezineelayisenisi zorhwebo.
Ukongeza kwiikhathalogu zokuchwetheza, iFont Squirrel inika a ijenereyitha yefonti yewebhu ekunceda wenze owakho uhlobo lohlobo. Ngokunjalo, ikwabandakanya isichongi sefonti, esinceda ukukhangela nokufumana iifonti ezisekwe kwimifanekiso.
Singafumana iifonti zasimahla zokukhuphela, zikwabandakanya iisimboli kunye nezinye izixhobo. Izinto ezikhutshelweyo ziyahambelana nePC kunye neMac.
Uninzi lweefonti zikhululekile ukukhuphela, kodwa kwezinye iimeko kukho imida yokusetyenziswa, ekufuneka ihlaziywe, zisenokuba zezomntu kunye nezingezizo ezentengiso kuphela.
Ngengqokelela enkulu, iSithuba sefonti, siqulethe phezu 30 amawaka iifonti simahla evela abayili ezahlukeneyo. Enkosi kule ngqokelela, unokufumana iifonti ezahlukeneyo zasimahla kwiiprojekthi zobuqu.
Iifonti ezibonakalisa isithuba sefonti iifonti ezinelayisensi, ukubeka nje ikhesa phezu kwayo kuya kukubonisa ela layisensi phambi kokukhuphela.
Ukuba ubhalisa kule webhusayithi, unethuba lokwenza ikhathalogu yobuqu yeefonti ozithandayo.
Iifonti zam, zinenye yazo iikhathalogu zefonti ezinkulu phakathi kwamaphepha ahlukeneyo oluhlu. Kule khathalogu, unokufumana zombini iifonti zasimahla kunye nezihlawulelwayo.
Ngesixhobo sokujonga kuqala, Iifonti zam, ikuvumela ngendlela eguquguqukayo, Bona ukuba izicatshulwa zakho zingajongeka njani ngefonti ekhethiweyo.
Yiwebhusayithi, ebandakanya ingqokelela yohlobo lohlobo oluphezulu. Inani elikhulu lezi fonti zikhululekile ukukhuphela, zombini iiprojekthi zomntu kunye nezorhwebo. Kuya kufuneka uphonononge ilayisenisi phambi kokuba uqalise ukukhuphela.
Ifonti ye-Abstract, isekelwe kwi-a inkqubo yodidi ukucwangcisa iifonti kunye nokwenza ukukhangela kube lula.
Musa ukukhohliswa ngegama layo, iifonti eziyi-1001, ibandakanya malunga ne-10 lamawaka eefonti ezahlukeneyo. Iwebhusayithi inengqokelela yeefonti ezahlukeneyo ezikumgangatho ophezulu simahla.
Ngeyakhe isitayile, ubungakanani kunye nokhetho lobunzima, ukufumana iifonti kuba lula kwaye ngokukhawuleza.
Abasebenzisi beefonti zasezidolophini, ungafumana a ingqokelela ngokufanelekileyo yohlobo lochwethezo. Zonke iifonti zokuchwetheza ezikhoyo kule webhusayithi zahlulwe ngokodidi lwazo.
Esinye sezixhobo eziphawuleka kakhulu kweli phepha lilo ukhetho lobuhlanga kunye nenkcubeko kwiifonti. Ifonti yesiArabhu, isiTshayina, isiHebhere, isiGrike, isiJapan kunye nesiRashiya inokufumaneka.
Unokuba nomdla wokufumana uBehance kolu luhlu, kodwa eli qonga, li abaqulunqi abaninzi abaphuhlisa iiprojekthi kwaye babelane ngazo.
Lo mxholo okwabelwana ngawo, unokukhululeka, kwaye apho sinako fumana iifonti zasimahla Ngesixhobo sokukhangela, iziphumo ziya kukubonisa uluhlu olungapheliyo lweefonti ezifumaneka simahla.
Inqaku elilungileyo likaBehance kukuba iifonti ozifumanayo kule ndawo, banesitayile esisodwa kwaye abaxhaphakanga kakhulu kunezo ozifumana kwezinye iisayithi.
Enye ye awona maqonga adumileyo malunga nokukhutshelwa kwefonti. Iifonti ezininzi ezikuyo zezokusetyenziswa buqu, kodwa sikwafumana iilayisensi zorhwebo.
I-Dafont, inobubanzi ukuhlelwa kochwethezo, oluququzelela ukhangelo lweefonti, enkosi kwiindidi.
Uluhlu alunasiphelo, kodwa siye sachaza iiwebhusayithi eziphambili apho unokuvelisa iifonti ngokuthanda kwakho.
Iileta ezintle ezinobumba
Kwimeko yethu siza kubonisa i iifonti ezintle ezinomtsalane onokuzifumana kwezi webhusayithi.
Uchwethezo onokulusebenzisa kwiiprojekthi ezahlukeneyo, iBolina, yifonti ijingiswe ngesimbo sakudala. Iqulethwe ngobunzima obuhlukeneyo be-stroke.
Lukhetho ukunika uphawu oluhle kuyilo lwethu. Umdaniso weskripthi, yi ukuchwetheza kwangoku kunye nokungaqhelekanga, apho iifandesi ezinkulu zenziwe kwisiseko seleta zayo.
I-Pinyon Script, yi uhlobo lohlobo lothando, olunemivumbo engqukuva etsalwa ngesandla, nto leyo inika inkangeleko emangalisayo kunye nenhle.
Olu khetho lwefonti yecursive luqulethe izinto zokuhombisa phakathi kwabalinganiswa bayo. Kukuchwetheza ilula kwaye ifundeka kakhulu, kunye nokuba nomoya wobufazi.
Umthombo idibanisa isimbo esilula kunye nesanamhlanje kubalinganiswa bayo. Phakathi koonobumba bayo kukho imivimbo eyahlukeneyo, ebhityileyo kwaye etyebileyo, eba luphawu lolu hlobo lokubhala.
Ngokukhanya kunye nemivumbo emide, iLovtony iba lolona khetho lufanelekileyo lwecursive entle. A i-airy typography ekusongayo kwimivumbo yayo.
ukuchwetheza nge iimpawu ezizodwa kunye nezinto zokuhombisa ezigobileyo, onokuthi unike ngayo umtsalane omhle nosesikweni kuyilo lwakho. Imivumbo yolwelo kunye nokugqibezela koonobumba kukubheja okukhuselekileyo kuchwethezo oluhle olugobileyo.
Uhlobo lokubhala nge umoya yothando kunye nebali lobuqu emva, njengoko ukuphefumlelwa kwavela kwintombi yomyili. Yindlela elula yokubhala ene-stroke elula kakhulu. Iimpawu zayo ezinyukayo nezihlayo zenza i-Miama ibe yi-typeface efanelekileyo yeetekisi ezincinci.
Njengoko ubonile, kukho inani elikhulu leewebhusayithi apho unokukhuphela iifonti ezintle zecursive, ukongeza kwikhathalogu yakho yefonti kunye neeprojekthi.
iifonti zecursive, yongeza ubuhle kunye nobuhle kwiiprojekthi ezisetyenziswa kuzo, yenza isitayile esisulungekileyo. Kodwa khumbula ukuba olu hlobo lweefonti alusebenzi ngendlela efanayo kuzo zonke iindawo ezisetyenziswa kuzo.
Ukuchwetheza kube yenye yezona zinto zibalulekileyo kuwo nawuphi na umsebenzi woyilo, nokuba yilogo okanye iwebhusayithi. Ukukhetha i-typeface echanekileyo, akudingeki ukuba ube yingcali kwintsimi, kodwa ukwazi ukufaneleka kwayo xa usebenza nayo.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye uyazi naziphi na iifonti ezibalulekileyo ekufuneka songeze kuluhlu, ungalibazisi ukusibhalela kwibhokisi yezimvo kwaye usishiye uluvo lwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Apho unokufumana khona oonobumba abahle kakhulu becursive
Lithini ibali elingemva kwelogo yeLego?
Imizekelo yoyilo lokuchwetheza